R/wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay khilaafka Soomaalida iyo Oromada – XAMAR POST
R/wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay khilaafka Soomaalida iyo Oromada
By Mohamed Ahmed On Sep 18, 2017
Ra’iisul Wasaraaha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa waxa uu ka hadlay rabshado dad badan ay ku dhinteen oo gudaha Itoobiya ku dhexmaray qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, waxaana uu tilmaamay in uu ka xun yahay khalalaasaha dhexmaray dadka rayidka ah.
Wuxuu sheegay in marka hore uu tacsi u dirayo Eheladii iyo qoysaskii dadkooda ku waayay khalalaasahaasi in ka badan laba bilood ka socday xuduuda u dhaxeysa Oromada iyo Soomaalida wada dega dalka Itoobiya.
Rabshadahan ayuu sheegay Ra’iisul Wasaaraha in labada dhinacba ay kaga dhigteen dad aan waxba galabsan oo aad u badan, taasi bedelkeeda ayuu sheegay in uu amray Ciidamada Itoobiya si ay u sugaan amniga.
Ra’iisul Wasaare Desalegn ayaa wacad ku maray in dadkii masuulka ka ahaa khalalaasahan la horkeeni doono sharciga, wuxuuna ku eedeeyay in dalka Itoobiya ay geliyeen marxalad deganaansho la’aan ah.
“Waxaan ka xumahay khalalaasaha dhexmaray dadka rayidka ah, ee u kala safnaa qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, waxaan tacsi u dirayaa Eheladii iyo qoysaskii dadkooda ku waayay khalalaasahaasi, dadkii masuulka ka ahaa falkan oo ay ka mid yihiin raggii warbaahinta u isticmaalayay sida qaldan sharciga ayaa la horkeeni doonaa” Ayuu yiri Hailemariam.
Dhanka kale Madaxweynayaasha Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya iyo Ismaamulka Oromada ayaa dagaalkaasi ku tilmaamay wax aanay horey dhaqan iyo caado toona midna ugu laheyn laba qowmiyadood ee Soomaalida iyo Oromada.
DEG DEG: Masuul uu Magacaabay M/weyne Farmaajo oo Facebook isku Casilay
Xldhibaanada Baarlamaanka oo maanta kulan yeelanaya